ပျော်ရွှင်သော အလုပ် | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
လင်းလဲလွမ်းလို့ လာပါတယ် ခဏခဏ။ အသစ်မရှိတော့စိတ်ညစ်ပြီးပြန်ပြန်သွားရတာ။ စီဗုံးလေးထားပေးနော် ။ နော်လို့ :)
ကိုယ်ဝါသနာပါရာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်နဲ့ တထပ်တည်းကျရင်ပျော်စရာဘဲ။ ကျနော်အခု ဘလော့ဂ်ရေးရတာ ၀ါသနာပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ကိုဘဲ ပုံမှန်ရေးပါ။ တလ တလကို အခုလက်ရှိလစာရဲ့ တ၀က်ပေးပါ့မယ် ဆိုရင် လက်ရှိအလုပ်ကို ထွက်ပြီး ဘလော့ဂ်ရေးဘို့အသင့်ဘဲ။ ကျနော့်ကို အလုပ်ခန့်ပါလား…အဟိ။
ချိုသင်း ကံကောင်းလိုက်တာ.. ဘာပဲပြောပြော ကိုယ်ပျော်တဲ့ အလုပ်ကို ကိုယ်လေးစားတဲ့ သူတွေနဲ့ လုပ်ခွင့်ရခဲ့လို့။
အစ်မရေ ပြုံးမိပြန်ပြီ….။ ပြီးတော့ လွမ်းမိပြန်ပြီ။ မြန်မာပြည်က စာနယ်ဇင်း ရောင်းရင်းတွေ၊ ပန်းချီ ဒီဇိုင်း ဘော်ဘော်တွေကို အစ်မစာလေးဖတ်ပြီး အရမ်းလွမ်းသွားတယ်။ ပန်းချီဆရာတွေကို နှိပ်ကွပ်တာတော့ ကြိုက်တယ် :P တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီမနက်ပဲ အွန်လိုင်းမှာ ဝလုံး တကောင်နဲ့တွေ့ပြီး အလွမ်းသည်ထားတာ။ သူက လက်ဘက်ရည်လိုက်သောက်ပါလားတဲ့။ စ တယ် အမရဲ့။ စာနယ်ဇင်းသမားဘဝမှာ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တကာ ထိုင်ပြီး လေပစ်ရတာလည်း လွမ်းတယ်နော် အစ်မ။ အစ်မရဲ့ သင့်ဘဝ အတွေ့အကြုံကလေးကို ပြန်ပြောပြတာ အားကျဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ အဲဒီဆရာကြီးတွေကို တူးက ကပ်လွဲသွားတာလေ ….။
ကိုယ်ရဲ့ ၀ါသနာနဲ့ကိုယ်လုပ်နေရတဲ့ အလုပ် ထပ်တူကျတာ ကံကောင်းခြင်းတစ်ပါးဆိုတာ ခံစားလိုက်ရပါတယ်..
ရှုပ်နေပြီ..ကေ ကတော့ကိုယ့်ကိယပဲများတာတဲ့လေ..း( ချိုသင်းရေ ..တို့လည်း အယ်ဒီတာဘ၀ရဲ့ ကြုံရဆုံရ
မောင်သန်းတို့နဲ့ သင့်ဘ၀ ကာဗာ စတိုရီရေးဖို့ workshop လုပ်ခဲ့တာကိုသတိရတယ်..ကေလည်းပါ
အတွေ့ အကြုံတွေ ဆက်ရေးပါအုန်းလို့ ။ KM
အသက်၂၃နှစ်မှာ မဂ္ဂဇင်း တစ်လတစ်အုပ်ထွက်နိုင်အောင်ကျိုးစားခဲ့ တဲ့မမိုးကို
အတွေ့ အကြုံလေးတွေက လွမ်းစရာလေးတွေပါ...။
အလုပ်မအားမှန်းမသိ၊ နေမကောင်းဖြစ်နေမှန်းမသိနဲ့ ...။
ကျနော်လာဖတ်လို့ စာအသစ်မတွေ့ ရင် ...ဖျားများဖျားနေကြလို့ လားဆို စိတ်ပူမိတာက အရင်ဗျ...။
၉၀နှစ်တွေရဲ့ မြန်မာစာပေလောကမှာ သင့်ဘ၀ ဟာ အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကနေပါခဲ့တယ်။
ရှက်စိတ်၊ကြောက်စိတ် ဆိုတဲ့ ကာဗာစတိုရီတွေက လူငယ်ထုအတွက်အင်မတန် အကျိူးများစေခဲ့တယ်။
စောင့်ဖတ်ရတဲ့ သင့်ဘ၀ ဟာ ဆရာတင်မောင်သန်း ၊မောင်သစ်ဆင်း နဲ့ မိုးချို တို့ လို တာဝန်ကျေတဲ့ အယ်ဒီတာတွေရဲ့ ပေးဆပ်မှုမပါခဲ့ရင် ၊ စာပေ သမိုင်း ၀င်ခဲ့ပါမလား လို့ တောင် တွေးမိတယ်
မချိုသင်း- ဖတ်လို့ကောင်းတယ်..( တနှစ်စာ ပြောထားမယ်)
သင့်ဘ၀ က..နေ..ကိုယ့်ဘ၀ တွေဖြစ်သွားခဲ့ပြီပေါ့။
သူငယ်ချင်းတွေ နောက်တဲ့..သီချင်းလေး ကို ဖတ်ပြီး..ပြုံးလိုက်ရတာ။
သင့်ဘ၀ ထဲက..မှတ်၂ ရ ၂ ဆရာတင်မိုးကို.. ဟိုး..တောကနေပြီး..ပညာရေးဝန်ကြီးက..တက္ကသိုလ် တက်ဖြစ်အောင်.. ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေး လည်း..စွဲ စွဲ ထင်ထင် မှတ်မိ နေတယ်။
Oh my god, I have waited so long to read your new post. I think you are so busy or you have no mood to write anything else. Anyway, I like your new post. Plz (Plz) try to post new new one.
အမရေ...အကြိုက်ဆုံး Magazine ဘာလဲလို့ ကျွန်မကို မေးခဲ့ရင် သင့်ဘ၀ လို့ဖြေမှာပဲ...သင့်ဘ၀ အလွမ်းပြေ post ဖတ်ရလို့ အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...ထီးကလေးနဲ့ မနီ ကဗျာစာအုပ်လေးမှသည် သင့်ဘ၀။ ယခုဘလော့ အထိ စာပေမျိုးဆက်အား လေးစားအားကျမိပါကြောင်း....အမ ပျော်ရွှင်ပါစေ
အစ်မကံကောင်းလိုက်တာ။ကိုယ်ဝါသနာပါတာကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် လုပ်ခွင့်ကိုမရသေးဘူး
၀ါသနာပါတာနဲ့ လုပ်ခဲ့ရတာ တစ်ထပ်တည်းကျလို့
စာပေသားသတ်ရုံကြီးတဲ့လား… ပြောတတ်လိုက်တာ ချိုသင်းရယ်… ဟုတ်ပါရဲ့… နှလုံးသားနဲ့ ရင်းပြီးရေးထားရတာမိုလား… ငယ်ငယ်လေးနဲ့စာပေအဆီအနှစ်ပြည့်ဝတဲ့ သင့်ဘ၀ကို ပြုစုပျိုးထောင်နို်င်တာ ချိုသင်းအတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်… ချိုသင်းရေ… ကိုယ်ဝါသနာပါတာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့တထပ်ထဲကျတဲ့ အလုပ်လေးကို လုပ်ဖူးခဲ့တာ ပြန်တွေးတိုင်းကြည်နူးကျေနပ်စရာပေ့ါ… ကံကောင်းတဲ့ ချိူသင်းကိုအားကျလိုက်တာ… ဒီဘလော့ဂ်လေးကလဲ သင့်ဘ၀နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်…
စ်ိတ်ပါလက်ပါ ဖတ် သွားပါတယ်။
ကိုယ်ဝါသနာပါတာနဲ့ထပ်တူကျတဲ့ အလုပ် လုပ်ရတ်ာဆိုတော့.. ကောင်းတာပေါ့.။
မချိုသင်း လုပ်ခဲ့ရတဲ့ အလုပ်က အားကျစရာကြီး။
အမလွမ်းမယ်ဆိုလဲ လွမ်းစရာပါပဲ။ အခုရေးထားတာ ဖတ်ရတာကိုပဲ တကယ်သတိရစရာပါ။
စီးပုံးထည့်ဖို့ကို လိုက်tag ရတော့မလိုဖြစ်နေပြီး။ အမတို့၊ မတန်ခူးတို့ မနုသွဲ့တို့။ အဟင်း။
အမ ခရီးထွက်နေရတယ်လေ။ ခု အိမ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ရုံးချုပ်ရောက်နေတယ်။ ချိုသင်း စာလေးတွေ့လို့ လာဝင်ပြောတာ။ ဘလော့မလည်နိုင် ဘလော့မရေးနိုင် ပေမယ့် အမ အသံကိုတော့ တိုက်ရိုက်လေလှိုင်းကနေ နေ့စဉ်ကြားနေရမှာပါ။ အင်တာနက်ကနေ နားထောင်ကြည့်နော်။
အမချိုသင်းရေ အသက် ၂၃ နှစ်နဲ့ စာပေလောကမှာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စွာ အကျိုးရှိတဲ့အလုပ် လုပ်ခွင့်ရခဲ့တာ အားကျစရာပါ။ နောင်လည်း အမစာတွေကို စောင့်မျှော်အားပေးချင်ပါတယ်။ ဘယ်အရာကိုလုပ်လုပ် ပျော်ရွှင်စွာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်လေးကို အတုခိုးပြီး ကြိုးစားရအုံးမယ် အမရေ။ စာဖတ်သူတွေ တွေးကာမပူရအောင် အမချိုသင်း စာပေတွေ ပျော်ရွှင်စွာဆက်ရေးနိုင်ပါစေ ဆုတောင်းနေမယ်။
ကိုယ့်ဆီသူလာရင် အမိုးမရှိတဲ့ ဆိုင်သွားရအောင်တဲ့။ သူဆိုလိုတာ ပလက်ဖောင်းပေါ် ခွေးခြေကလေးတွေနဲ့ သောက်ရတဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင်ကို သူကြိုက်တယ်။
သူ့ဆီကိုယ်သွားရင် စမ်းချောင်းပါတီယူနစ်ရုံးရှေ့က သင်းချိုင်းဘေးမှာ ကပ်ဖွင်ထားတဲ့ ထမင်းကြော်ဆိုင်မှာ သူအမြဲ လိုက်ကြွေးတယ်။
ဆရာမြအကြောင်းသပ်သပ်ရေးထားတာ ရှိတယ်။ မချောရသေးလို့ မတင်ဖြစ်တာ.....
အဲဒီလို ပျော်ရွှင်သော အလုပ်မျိုးလုပ်ချင်လိုက်တာ။ ခုထိတော့ ရှာမတွေ့သေးဘူး။
လာပြီး နှူတ်ဆက်ပါသည်။ နှူတ်ဆက်တယ် ဆိုတော့ဘယ်သွား မလို့လဲထင်နေဦးမယ်။ ဘယ်မှ မသွား။ ခင်လို့လာနှတ်ဆက်တာပါ။
copy from ama KOM
[လာပြန်ပြီလား..ဒီဘောလုံးလို့ပြောနဲ့နော်... :-( ]